Ndeupi Unosarudza, Electric sikuta kana Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Ndeupi Unosarudza, Electric sikuta kana Skateboards
Vazhinji zvitoro paIndaneti kuti akatanga kupa vaizviti BALANCInG Scooters uye hoverboards zvakare. Sikuta Silent Kunounza musoro akatemerwa mutengo, chikuru unhu avhenyu-yepamutemo, Koowheel green electric scooters Export kuna Europe. Ruoko kana tsoka michina akamedura achibvumira kuti kumisa sikuta pakarepo pasina kuteurwa pachiyero. With functionality ichi uchazonakidzwa kusiya kwako isimbe sikuta pamberi uye musambotya kuti mumwe munhu atasve nayo kure sezvo hazvishandi kusvikira iwe achizviendesa bhatani zvakare. Izvi zvakavakwa kumusoro chaizvo zvinodiwa izvi private transporters ichavakwa kuti, uye haana chero zvinonetsa kuchengeteka kuti nhamba vaduku pezvitsiga vane. The Scooters dziri kwakaitwa fanana musimboti apo microprocessors somutsivi womutariri kwepfungwa anotakura chiratidzo injini.
Electric asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Scooters aigona kuva ngozi pane bikes kubva kazhinji ivo yakagadzirwa vakaoma epurasitiki zvinhu uye tingadai tisina kuita kufamba zvakawanda kuti kungaita zvinogona kukuvara. Mushure iwe kuti kupera pamwe mutasvi Tutorial ipapo unogona farira zvose zvaidiwa Anwendung. Ndezvipi zvokusarudza yakanakisisa matatu sikuta vechiduku? Nokuti asika majoini vane mikana yakakura compression mukukuvara angaguma shwashwa kukuvara kwenguva refu nyaya, pediatricians zano yakaderera simba muviri, kunyanya kufuta vechiduku vane majoini vatova panjodzi. Ndiani anoda kufamba kana uchazonakidzwa kuti papfungwa, zvakakodzera? Hoverboards kunogonawo siyana mukati-siyana mavhiri. Vakawanda nengarava zvakananga kubva China saka achatora mazuva 7-12 kusvika mukati US. Kana uchida mamwe rokutsanya, unogona kunhonga hoverboard yedu mhiri kwemakungwa yokuchengetera zvinhu. Nepo vechiduku nevakura vakawanda vakajaira kuchovha mabhasikoro kuti vane pamberi tai mabhureki undovakira-tai braking iri kunyange njodzi uye anoderedza mukana muduku aizokandwa mberi asi kurega pakarepo. Its yakagadzirwa ne muhombe Threaded matayi imwe yakanakisisa utariri uye makabatisisa anenge chero pose, kunyange egungwa! Pane anowedzera chiduku kure utariri kuti inoita kuti kudzora Electric skateboard .
Takaona chaizvoizvo zvikuru nyanzvi uye ruzivo magadzirirwo mudonzvo iri nemauto, uye isu kunyange tine dzinonetsa asingasaruri bvumidzwa unyanzvi, yepamusoro Check midziyo uye kugadzira chawo iyo kunovimbisa zvakarurama zvigadzirwa. Kune yakawanda vakakurumbira vachishandisa maturusi ichi kuzvipira vakadengezera uye mudziyo uyu akakura kuva kupfuura akumbira uye zvakanakisisa kukurudzira yezororo rokutenga nyaya gore rino (2018). Chinonyanya E1 zvikuru acclaimed vakawanda nevechiduku. Just kubuda mberi, iwe uchava kukwanisa parwendo nayo mumaminitsi, hwemazuva kudzidza akatasva iri maminitsi 3-5 chete. Kana iwe akatasva kuneta, chinogona akapeta. Saka zviri nyore kwazvo.
Chimwe chinhu Wireless kure yemagetsi skateboard pamwe Replaceable PU mavhiri Unique design kuchabatsira Motors kutonhora maximumly Max Speed 42km / h, pamwe pose zvichiita, kuramwa mabasa achitevedza tichifunga vanhu. Tsvimbo shure skateboard ichi rinoati " mhedziso yemagetsi skateboard ," uye isu tiri kuda kuona sei. The KOOWHEL Electric Skateboard zvino kunouya Dual Motors! Electric skateboard zvikuru mamiriro ezvinhu ushamwari, imwe pachena mukufamba nhokwe maawa. Unogona kutenga kupembedza bhatiri. kana kuti, iwe musafunganya pamusoro inoyerera bhatiri pashure kurishandisa.
Post nguva: Feb-01-2018